Iiglavu zeplastiki zokutya Intshayelelo
Iiglavu zePvc zisetyenziswa kakhulu kubomi bemihla ngemihla, kunye nefuthe lokhuselo lwempilo, ukusebenza kakuhle kokukhusela, ukhuseleko kunye nokungabinetyhefu, ukwamkelwa ngokusetyenziswa kwemveliso yokhuselo.Imveliso kumazwe athuthukileyo nakwimimandla inentengiso ebanzi. Iimveliso zahlulwe zaba ziigloves zomgubo (kwinkqubo, intwana yomgubo wengqolowa incamathele kumphezulu weiglavu ukugcina iiglavu zicocekile kwaye zigudile) kunye neiglavu ezingenampuphu (kwinkqubo, i-PU ephatha iarhente isetyenziselwa ukubuyisela umgubo wombona ukuze udlale indima efanayo Ukusuka kwinqanaba, kukho ikakhulu iiglavu zebakala lonyango kwiiglavu zebakala loshishino (ukwahlula isalathiso ubukhulu becala kubungakanani benqanaba leenaliti); Ukusuka kwimodeli yahlulwe yaya XS \_ S \_ M \_ L \_ XL \_ yandiswa, yandiswa, Emva kophando, iimveliso zipapashwa ikakhulu kwinqanaba lomgubo weefektri kunye nenqanaba lokuncokola elingena mgubo S \_ M \_ L \_ XL, M \_ L njengeemveliso eziphambili.
Umgangatho wokuveliswa kweglavu yePvc Iinkcukacha zemveliso
Umgca wemveliso yeglavu ye-PVC yamkela eyona nkqubo iphambili yokuvelisa isikhuseli, umgangatho wemveliso ofanelekileyo ufikelela ngaphezulu kwe-97%, umgangatho wemveliso ulungile, isivuno siphezulu, sinokutshintsha ngokupheleleyo ukusebenza kwencwadana;
Iglue engagungqiyo iyafana kwaye ifilimu iyafana. Iiglavu zigqityiwe ngexesha elinye ukusuka ekubunjweni kwesandla, ukuqhuma, ukugqobhoza, ukunyanzela ukuhamba kwangaphandle kunye nokususa iiglavu, njl., Ngokukhawuleza isantya, abaqhubi abambalwa kunye neendleko eziphantsi zokuvelisa.
Imveliso yeglavu yezixhobo zamandla
1.Ukuqaliswa kokuhamba phambili kwesakhiwo se-sprocket, yonke into yokuxhathisa esebenza kukuncinci, umsebenzi wokuvelisa uzinzile, ingxolo ephantsi;
2.Ukuqhuba kweemoto eziphambili kusombulula iingxaki ezininzi, ezinjengokutsala, ubunzima, ukusilela kunye nobunzima kulondolozo;
3.izixhobo zamandla afana nebhoyila, ukonga umbane kunye nokusebenza okuphezulu, ulwakhiwo olufanelekileyo, ingxolo ephantsi, ukusebenza okuphezulu kokhuseleko;
4.ukuqhelaniswa nokubumba, kwitekhnoloji yokufaka iikhowudi kumatshini;
5.esetyenziselwa ukucoca umnwe ngomnwe wesithandathu segubu ixesha elide lobuchwephesha bokucoca iteknoloji;
6.Ukucaciswa kweemveliso ezifanayo zomatshini, uhlengahlengiso lomda oluzenzekelayo, ubomi benkonzo ende yomatshini;
Ngokuya kumthengi kufuneka ayile ubude obahlukeneyo be-125-200m, ukuphakama, indleko zemodeli.
Inkqubo yokujonga ngokubanzi
Iiglavu ze-PVC zisetyenziswa ngokubanzi kukhuseleko lwabasebenzi kunye nococeko lwasekhaya kuhlolo lwezempilo, ishishini lokutya, ishishini leekhemikhali, ishishini le-elektroniki, ishishini lamayeza, ipeyinti kunye nokwaleka ishishini, ushicilelo kunye nokwaleka kumzi mveliso, ezolimo, amahlathi, izilwanyana kunye namanye amashishini.
Egqithileyo Umgca wemveliso yeglavu ngokubanzi yePVC
Okulandelayo: Inqanaba lokuvelisa inzala yeiglavu zenzala
PVC Banokubulawa Glove Ukwenza Machine
PVC Examination Iziqhano Ukwenza Machine
PVC isikhuseli nkxu Machine
PVC isikhuseli Izixhobo
PVC isikhuseli Machine
Umgangatho wokukhusela isikhuseli